SOLOMBODIAKOHON’NY FILOHAM-PIRENENA : Ny ao amin’ny fampianarana no tena voa
Namoaka fanambaràna ihany koa ny Sendikan’ny mpiasa ao amin’ny oniversiten’i Mahajanga. 9 janvier 2020
Voalohany dia misaotra ny Filoham-pirenena izy ireo nanome io ‘panier garni’ an’ny mpiasam-panjakana rehetra io. Manambara anefa izy ireo fa mbola tsy tonga eo am-pelantanany ny azy ireo hatramin’izao. Ny Minisiteran’ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa no miahy azy ireo.. Mitaky ny hanomezana ny anjarany izy ireo mba tsy hisian’ny fanavakavahana amin’ny samy mpiasam-panjakana sy mba hitovian’izy ireo zo amin’ny mpiasam-panjakana hafa satria mpiasam-panjakana toy ny mpiasam-panjakana rehetra izy ireo.
Ao amin’ny Minisiteran’ny fanabeazam-pirenena sy fampianarana ara-teknika sy araka asa kosa dia saika mitaraina ireo mpampianatra manerana an’I Madagasikara ary misy ny efa nanomboka ny fitokonana. Ny eto Mahajanga manokana moa dia nivory ireo mpampianatra amin’ny fampianarana ankapobeny ny talata reo ary nanapa-kevitra ny hiray hina fa tsy handray ny vola 9396 Ariary nefa asaina manao sonia vola 65.000Ariary. Ny mpampianatra any amin’ny lisea teknika eto Mahajanga kosa dia manao fitokonana mitaky ny anjarany.
Ny tany Farafangana moa dia voalaza fa 13 000Ariary no homena ireo mpampianatra any amin’ny EPP sy CEG fa ny mpiasa birao sy mpampianatra eny amin’ny teknika kosa hahazo ny 65 000 Ariary feno. Ankoatra izay dia voalaza koa fa nisy nanafika ny tranon’ny talem-paritry ny fanabeazam-pirenena sy ny fampianarana teknika sy fampiofanana araka asa, ka lasan’ireo olon-dratsy ny sasany amin’ny vola 136 tapitrisa Ariary izay natao hozaraina amin’ireo mpampianatra. Araka ny loharanom-baovao tany an-toerana moa dia tsy nisy nipitsoka ny trano fa ny rain’io tale io no naratra nandritra ny fanafihana. Voalaza fa tany ambany kidoro koa no nanafenana ilay vola.